Tattookeygu wuxuu keenaa xasaasiyad, maxaan sameeyaa? | Tattoo
Tattookeygu wuxuu keenaa xasaasiyad, maxaan sameyn karaa?
Muddo ka hor ayaan ka hadalnay Tattoo ku saabsan runta raaxada leh ee hareeraha xasaasiyad iyo taatoos. Iyo, inkasta oo fal-celinta xasaasiyadda ee tattoosku aysan ahayn mid aad u soo noqnoqota, sidaan soo sheegnay waqtigaas, ma jiraan wax khatar ah oo eber ah, sidaa darteed, nasiib darro, waxaad ka mid noqon kartaa dadkaas oo, iyadoo dhalanteed oo dhan ay yihiin, ay sameeyaan tattookoodii ugu horreeyay ayna helaan xaqiiqda qallafsan ee jirkoodu diidayo khadka ama mid ka mid ah hooska uu u adeegsaday farshaxanka tatuuga.
Hadda, markaan u imaado xaaladda in taatuuga igu kiciso xasaasiyad, maxaan sameyn karaa? Waa waxa aan ka wada hadli doonno maqaalkan oo dhan. Waana haddii haddii ay tahay durba maqaarkayaga oo aan ku taabanno oo aan aad u dooneynnay laakiin, aan aragno in ay noo keento falcelin xasaasiyadeed, Waa maxay daaweynta aan raaci karno si aan isugu dayno inaan u xallino dhibaatada ama u yareynno? Hagaag, waxaan dooran karnaa mid ka mid ah daaweynta soo socota, tan ugu fudud uguna raaxada badan in la mariyo kareem, halka kiisaska ba'an ay tahay inaan doorto ka saarista tattoo.
1 Isticmaal kareemada corticosteroid ama boomaatada
2 Xaaladaha khafiifka ah, fuuq-celinta maqaarka ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan
3 Haddii loo baahdo, way fiicantahay in laga saaro sawirka
Isticmaal kareemada corticosteroid ama boomaatada
Marka hore iyo haddii ay dhacdo xasaasiyadda xasaasiyadeed inaysan aheyn mid xad dhaaf ah (dabcan), waxaan dooran karnaa inaan adeegsanno nooc ka mid ah kareemka corticosteroid ama boomaatada. Hadda, xaaladaha qaarkood, isticmaalka kareemka noocan ah maahan mid qeexan, tan iyo markii aan ka laabanno codsigiisa, barar iyo cuncun la xidhiidha nooc kasta oo dareen-celin xasaasiyadeed oo maqaarka ah. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa inaan marwalba la tashannaa dhaqtarka reerkeena ka hor intaadan isticmaalin kareemada noocan ah ama boomaatada maadama isticmaalkooda dheer uu waxyeelo u geysan karo maqaarka laftiisa
Xaaladaha khafiifka ah, fuuq-celinta maqaarka ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan
Gaar ahaan hadaad tahay qof maqaarka qalalan, Isticmaalka nooc ka mid ah kareemada huurka ama boomaatada aagga taatikada ayaa dejin kara saameyno badan oo iyaga u gaar ah iyagoo isticmaalay nooc ka mid ah khad ama midab midab noo keena xasaasiyad. Xaaladaha ay xasaasiyaddu yar tahay, way dejin kartaa, in kasta oo aysan ahayn xal rasmi ah, xasaasiyadda aagga ka jirtaa inta badan way baaba'daa dhawr bilood.
Haddii loo baahdo, way fiicantahay in laga saaro sawirka
Haa haa, nasiib daro, haddii loo baahdo, Haddii aadan joojin karin fal-celinta xasaasiyadda ee khadku, waa inaad doorataa saarista sawirka. Xaaladahaas oo kale, waxaad dooran kartaa laba nooc oo kale: Ka-qaadista qalliinka iyo isticmaalka leysarka si looga saaro tattoo maqaarka.
By habka, Waxaan go aansaday inaanan isticmaalin sawirada sawirka dhabta ah kuwaas oo sababay xasaasiyad maxaa yeelay waxay ku noqon karaan wax aad u xun indhaha. Kaliya tag Google oo ka raadi "fal-celinta xasaasiyadda astaamaha" si aad u aragto gacanta hore waxa ay uga dhigan tahay tattoo inuu keeno xasaasiyad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattookeygu wuxuu keenaa xasaasiyad, maxaan sameyn karaa?
Waad salaaman tihiin, habeen wanaagsan, waxaan hayaa dhowr tatoos waana waqtiga ugu badan ee igu soo dhaca kuuskuus iyo. Waa cuncun, fadlan ii sheeg waxa aan sameyn karo. Maxaa la xidhaa Waxaan rajaynayaa jawaab! Mahadsanid
Waa salaaman tahay Shaki ayaa igaga jira… 10 maalmood ka hor ayaa la ii sawiray, abbaaraha maalintii 7aad, markii wax walba ay hore u diireen oo aan caafimaad qabay, waxaa igu wareegsanaa xasaasiyad ka soo baxday...Runtu waxa ay tahay in aanad fiirin, kaliya marka saabuuntu dareento...ma qandho ama ma gubato ama waxba... Taasi caadi ma tahay?
Ku jawaab Anabella
Julieth 11 dijo
Waad salaaman tahay waxaan rajaynayaa inaad fiicantahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado hadii xasaasiyadaada tattoo ay bogsato iyo waxa ay ahayd inaad sameyso.
Waxay la macno tahay in tattoo-ga uu cuncunaayo oo uu bararsan yahay waxaa sabab u ah xasaasiyadda waxaan u leeyahay tattoo sidan oo kale ah khad cas dartiis su'aashu waxay tahay tattoo ayaa caafimaad qaba mise maaha kareemyada.
U jawaab Carlos Cesar Obregon Jarquin
Dayaxa iyo xiddigaha
Tattoo wadnaha oo leh qodax, astaan ​​asal ahaan qarniyadii hore